"Hey Siri" dia tsy mandeha intsony rehefa mametraka ny iPhone ao am-paosy | Vaovao IPhone
Araka ny efa fantatrao betsaka, tamin'ny fahatongavan'ireo iPhone 6s dia tonga ihany koa ny fahafahan'ny fihainoana "Hey Siri" mihaino foana na dia tsy mifandray amin'ny tambajotra elektrika aza ilay fitaovana. Mba hanaovana izany, dia mampiasa ny chip M9 vaovao, mpiara-miasa miaraka amin'ny hery ambany ianao, izay mitantana ny baikon'ny feo, izay toa mampiasa angovo kely. Na izany aza, rehefa eo am-paosy ilay fitaovana dia mijanona tsy mandeha ity mpiara-miasa ity, miaraka amin'ny hany tokana fampihenana ny bateria farany ambony azo atao, fepetra tsara, satria raha misy zavatra tsy tavela ao amin'ireo fitaovana Cupertino, dia bateria io.
Amin'ny fitaovana alohan'ny iPhone 6s, ny lahasa "Hey Siri" dia mitaky ny hampifandraisina amin'ny loharano herinaratra ny iPhone, izany dia vokatry ny fikasana tsy mihinana bateria be loatra izay mamela antsika tsy misy telefaonaSatria ny M8 co-processeur dia tsy manana fahaizana mitantana an'ity angona audio ity, mitantana ny an'ny sensor an'ny fihetsiketsehana fotsiny izy hitantanana ny angona fahasalamana.
Ity fampahalalana ity dia hitan'ny ekipan'i AppleInsider ary nozarain'izy ireo tamin'ny olona rehetra izany. Noho izany, mamela antsika hahafantatra fa i Apple indraindray tsy dia majika araka izay tian'izy ireo atao, satria tsy hita na aiza na aiza izy io. ity fiasa ity, izay hitantsika, ohatra, tamin'ny fitaovana maro tamin'ny Windows Phone na amin'ny Samsung Galaxy hafa, tsy mikendry ny "Ok Google", fa natao ho an'ny fiasa hafa, samy manana ny fikasana hamonjy bateria ary tsara izany.
Noho izany, tsy tokony hiasa saina kely akory isika amin'ny fampandehanana an'i Siri ary mihaino antsika tsy tapaka izy io, kely dia kely ny fiatraikany amin'ny bateria, na dia androany aza ny bateria dia sarobidy loatra ka mandany izany amin'ny fitaovana izay tsy ampiasaintsika tsy tapaka. na mahazatra, ka izay ny fanapahan-kevitry ny mpampiasa tsirairay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » "Hey Siri" dia kilemaina rehefa mametraka ny iPhone ao am-paosy
Manana Galaxy Note 3 aho ary ny baiko hoe "Hello Galaxy" dia milamina foana na dia eo aza ny lamina hidin-trano rehetra, dia esoriny io mba hamaly ny fangatahako. Mazava ho azy fa tsy azo atao ny misintona ny hidy satria azo ovaina amin'ny menio fanovana izy ity fa indrindra fa mazoto foana aho mandritra ny fotoana tsy misy olana ary mamaly tsara izy io, manitsy ny feon'ny mozika, miato, milalao ary na dia misy sary aza. lazao fotsiny ny baiko mety.
Andao ary, nahazo galifnate ianao ...
HTC: "Apple no mandika antsika"